Sida loo sameeyo joornaal: tillaabooyinka la raaco iyo qalabka naqshadeynta | Hal-abuurka khadka tooska ah
sida loo sameeyo joornaal
Abuuritaanka majaladda waxay u ekaan kartaa hawl fudud haddii aad leedahay aqoon kugu filan oo aad ku qaabayn karto. Laakin ma aha hawl saacado qaadanaysa, balse waa hawl qaadan karta bilo.
Maqaalkan, waxaan rabnaa in waqtigaas uu noqdo mid aan waxba ahayn, taasina waa sababta aan kuugu diyaarinay hage-yare-yar oo leh qaybo ama qodobbada qaarkood ee ay tahay in la tixgeliyo, marka aan naqshadeyno majaladda xoqan. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato naqshadaynta tifaftirkanala joog oo baro wax badan oo ku saabsan dhinacan mideeya naqshadaynta garaafka.
1 Talooyin aad maskaxda ku hayso inta lagu jiro naqshadeynta
1.1 Isticmaal tusaallo
1.1.1 Si loo tiriyo boggaga
1.2 Nakhshad dabool soo jiidasho leh
2 Waxyaabaha kale ee muhiimka ah
2.1 Aqoonta naqshadeynta garaafyada
2.2 Barnaamijyada aan isticmaali doono
2.3 ku meel gaar ah
2.5 Dhinacyada farsamada
3 majaladaha waxyiga
3.1 Elle Magazine
Talooyin aad maskaxda ku hayso inta lagu jiro naqshadeynta
Ka hor inta aanad bilaabin naqshadeynta oo aad hoos ugu dhigto shaqada, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo qodobbo taxane ah oo la socon doona majaladdayada.
Haddii aadan weli khabiir ku ahayn naqshadeynta tifaftirka iyo qaabeynta bogga, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho jaantusyada. Qaababku waa nooc hagayaal ah taasi waxay kaa caawin doontaa inaad si sax ah u qaybiso dhammaan macluumaadka iyo dhammaan walxaha aad rabto inaad ku darto boggagaaga (qoraalo, sawirro, iwm.)
Hababka oo ay la socdaan boggaga sayidku waxay kaa caawinayaan inaad si sax ah u tirsatid boggaga oo aad hubiso in dhammaan walxaha la dhigay meel fog oo isku mid ah. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa soo dejinta template, ku fur Adobe InDesign oo bilow tafatirka, dhejinta sawirada iyo dhejinta qoraalkaaga. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa jaantusyada gaarka ah adiga oo isku beddelaya xarfaha ama midabada midabaynta si aad u abuurto noocyo kala duwan oo muuqaal ah oo kala duwan.
Si loo tiriyo boggaga
Si aad u abuurto template adiga kuu gaar ah waa muhiim inaad aado InDesign. Markaad abuurto dukumeenti leh cabbirka u dhigma iyo margins, tag guddiga pages (Daaqadda > Bogagga) oo dhagsii astaanta bogga sayid ee lagu tilmaamay xagga sare ee guddiga.
Si aad u geliso tirooyinka bogga, ku samee qaab qoraal ah bogga oo tag ikhtiyaarka Nooca > Geli xarfo gaar ah > Bookmarks > Lambarka bogga hadda.
Samee madax-madaxeedyo, kuwaas oo inta badan lagu dhejiyo xagga sare ama hoose ee bog kasta, oo sidaas samee adigoo isticmaalaya Nooca Qalabka (T). Ku dar magaca majaladda ku xigta kordhinta iyo magaca maqaalka ama qaybta bogga xiga oo aad dhammaysay.
Nakhshad dabool soo jiidasho leh
Haddii aad waligaa iska diiwaan gelisay joornaalada, waxaad ogaan doontaa, gaar ahaan wargeysyada caanka ah sida Vogue, inay isticmaalaan ilo garaafyo soo jiidasho leh.
Sidan oo kale waxay hubiyaan in akhristuhu uusan kaliya ku raaxaysan naqshadeynta laakiin sidoo kale xasuusin daboolka, taas oo ah, waxay isticmaalaan naqshadeynta xusuusta leh sawirro, codad iyo xarfo soo jiidasho leh.
Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in:
Isticmaal sawir ama sawir xiiso leh taas oo abuuri karta xoogaa xiiso ah daawadayaasha. Si taas loo sameeyo, taladayadu waa in la isticmaalo sawirro leh diyaarado aad u dhow (ku dhow ama aad u dhow) .
Hayso kala sareynta qoraalka wanaagsan, tan waxaa muhiim ah in aad taqaanid sida loo kala saaro waxa uu yahay cinwaan, calaamad, subtitle, iwm. Si dhammaan macluumaadka la saadaaliyay ay macno u yeeshaan marka akhristuhu akhriyo, isla markaana aanay u lumin isku-duubnaanta farriinta.
Isticmaal ugu badnaan laba farood oo kala duwan taas oo laga yaabo inay la xidhiidho xagga naqshadaynta oo si fiican loo isku dari karo. Waxaan kugula talineynaa inaad mid u adeegsato ciwaanka ugu weyn iyo mid kale oo aad u isticmaasho qoraallada kale.
Waxa ku jira sidoo kale waa inuu noqdaa mid soo jiidasho leh oo aan aad u mashquulin waxa aan xiisaha lahayn. Taas awgeed, waxaa muhiim ah in ka hor intaadan qorin aad suurtogal ka dhigto sawir-gacmeedyo hore ama qabyo ilaa aad ka helayso midka ugu dambeeya.
Aqoonta naqshadeynta garaafyada
Tani waa mid ka mid ah wejiyada ugu muhiimsan ee ka kooban qaabeynta iyo qaabeynta macluumaadka ka soo bixi doona boggagaaga iyada oo loo marayo naqshad si fiican loo fekeray iyo naqshad macquul ah. Waa mid ka mid ah marxaladaha sida dhabta ah u qaadata wakhtiga ugu dheer in la gaaro is afgarad, sababtoo ah waa lama huraan in la gaaro yoolka.
Ka dadweynaha in aan yeelan doono, qaabka, nooca warqad, iwm. Waa inaan bixinaa naqshad joogto ah oo isku xidhan, laakiin waxa ka sarreeya wax kasta oo soo jiidanaya dareenka oo ku martiqaadaya akhrintiisa ilaa dhammaadka.
Halkaa marka ay marayso arrimo ay ka mid yihiin qoraal-qorista ayaa soo galay taas oo loo isticmaali doono, cabbirka, qaybo kala duwan oo ka koobnaan doona macluumaadka (ciwaanada, hordhaca, bandhigyada, sawiro, sawiro, aragtiyo qarxa, iwm.), midabada ugu muhiimsan ee xukumi doona oo calaamadayn doona qaabkooda, midabada sare ama kuwa kale. iwm.
Barnaamijyada aan isticmaali doono
Naqshadeeyaha samayn doona naqshadaynta majaladdaada, waa in uu fuliyaa qaabka ama qaabka aasaasiga ah halkaas oo waxa ku jira lagu dari doono hadhow.
Waxaan kugula talineynaa in aan u shaqeyno sida kor ku xusan, laga bilaabo qaab-dhismeedka aasaasiga ah oo ka kooban shuruudaha naqshadeynta ee hore loogu heshiiyey. Tan waxaa jira software tafatir oo kala duwan sida QuarkXPress, Adobe InDesign, Freehand iyo kuwa kale oo dhameystir ah oo sidoo kale naga caawin kara sida Illustrator, Photoshop ama CorelDraw, iyo kuwo kale.
ku meel gaar ah
Guud ahaan, majaladda waxaa la daabici karaa laba toddobaadle, bishiiba, Labadii biloodba mar ama saddexdii biloodba mar. Waxa kale oo jira kuwo sameeya laba daabac sannadkii iyo xitaa hal.
Wax walba waxay ku xirnaan doonaan nooca joornaalka aan sameyneyno iyo bogaggeeda (laga iibinayo dadweynaha, isdiiwaangelinta, iwm.) iyo wax kasta oo ka sarreeya helitaanka macluumaadka. Majaladda associative, tusaale ahaan, ma lahaan doonto macluumaad aad u badan si ay u daabacdo bil kasta.
Dhanka kale, daabacaad kale oo leh dulucda danta guud ama isticmaalka oo laga iibiyo dadweynaha, ayaa hubaal ah inay awood u yeelan doonto inay si joogto ah suuqa ugu soo saarto.
Ka hor inta aanad go'aansan shuruudaha naqshadaynta ee majaladda, su'aalo taxane ah waa in laga jawaabaa si loo qeexo xuduudaheeda iyo baaxaddeeda si wanaagsan. Marka hore waa in aan qeexnaa profile-ka dadweynaha aan rabno in aan wax ka qabanno, taas oo ah, qofka aan rabno in uu noqdo akhristaha daabacaaddayada.
Haddi yoolka si fiican loo qeexo, waxa aad noo fududaan doonta in aan sii wadno mashruuca oo aan qeexno waxa lagu dari doono, qaabka iyo, ka sarreeya, shuruudaha bilicda ama naqshadeynta. Tafatirka joornaalka dhalinyarada la mid ma aha akhristaha da'doodu u dhaxayso 40 iyo 60 jir.
Qaybtani waa koob kooban oo ku saabsan wixii kor lagaga hadlay, qaybtan dhexdeeda waa in aad falanqeyso oo aad go'aansatid dhinacyada sida qaabka ama cabbirka in ay yeelan doonto (A4, A5, qaab gaar ah, tabloid, iwm.), warqadda loo isticmaali doono (miisaanka, dhaldhalaalka ama matte, varnished, iwm), midab (midab buuxa ama madow iyo caddaan), iyo daabacaadda (tignoolajiyada dhijitaalka ah ama dhimista).
Marxaladdan gudihiisa waxa muhiim ah in la bilaabo si cad oo ku saabsan shirkadda daabacaadda ee u xilsaaran daabacaadda majaladda.
Nashqadeeyaha ayaa sidoo kale mas'uul ka noqon doona qeexida macluumaadka lagu daabici doono majaladda. sida ku cad line-tafatirka. Arinta ugu badan ayaa ah in dhamaan shaqaalaha waaxdani ay qabtaan golayaasha tifaftirka oo ay hogaaminayaan tafatiraha guud iyo agaasimaha daabacaada, halkaasi oo ay kaga doodaan kuna qeexaan mowduucyada xiiseeya dhageystayaasha ka hor inta aysan faahfaahin.
Daabacaad kasta, iyada oo aan loo eegin waqtigeeda, waa in ay la shaqeyso taariikhda xidhitaanka, taas oo ah, dejiso maalinta ay wax walba dhammeeyaan (qorista, naqshadeynta, iwm.) ee jadwalka.
Caadiyan, marka la calaamadinayo taariikhda, doorsoomayaal gaar ah ayaa lagu xisaabtamaa, sida, tusaale ahaan, maalmaha loo baahan yahay daabacaadda, dhamaystirka, maaraynta, rarida, iwm.
Halkan waxaa ah liis joornaal ah oo kugu dhiirigelinaya.
Waxaa lagu aasaasay Faransiiska 1945, wuxuuna leeyahay 44 daabacaad oo adduunka oo dhan ah iyo 37 mareegaha internetka. Joornaalka Elle waa hay'ad ku taal aduunka moodada waxayna siisaa meel mudnaan leh naqshadeeyayaasha, moodooyinka iyo sawir qaadayaasha caanka ah ee caalamiga ah.
Waa joornaalka moodada dumarka ugu weyn aduunka oo laga helo 60 wadan iyo 46 luqadood. Isbaanishka, waxay ka tagtay raadkeeda dhaqanka caanka ah tan iyo 1986. Dabooshadeeda astaanta ah iyo nuxurkeeda ayaa soo muuqday, taas oo siisay awoodda suuqa caalamiga ah.
Majaladdani waxa ay leedahay mowduucyo kala duwan oo kala duwan oo u sahlaya dumarka in ay helaan macluumaadka ku saabsan quruxda, caafimaadka, dahabka, xiddigiska, maaweelada iyo wararka ugu dambeeyay ee nolosha dadka caanka ah.
Joornaalkani wuxuu isku daraa moodada iyo mowduucyo aad ugu eg xaqiiqada haweenka. Diirada uu saaray nolosha galmoodka waa mid ka mid ah qodobadiisa ugu caansan, mar haddii ay jebiso xayndaabyada xaaraanta ah.
Inkasta oo mawduucyadeeda dhexe ay la xiriiraan moodada iyo cilaaqaadka, bogaggeeda waxay sidoo kale daboolayaan isbeddellada ugu dambeeyay ee dhinaca moodada, cuntada iyo cuntooyinka cocktail, faallooyinka timaha caanka ah iyo qaababka, iyo fikradaha hadiyadaha.
Cosmopolitan waxaa loogu talagalay in lagu dhiirrado haweenka, daboolkooduna wuxuu ka soo horjeedaa joornaalada kale ee geesinimada iyo sawirqaadashada dareenka leh. Waxa lagu daabacay in ka badan 100 waddan.
Waa majaladda lambarka 1 ee Spain, waxaana hadda agaasime ka ah Olga Ruíz. Telva waxay la qabsataa isbeddelada bulshada, si ay u soo bandhigto waxyaabaha hadda jira ee moodada iyo quruxda, si loo daboolo baahida dadweynaha dumarka.
Telva waxay dabooshaa dhammaan moodada caalamiga ah iyo isbeddellada quruxda waxaana uu ahaa af hayeenka naqshadeeyayaasha Isbaanishka, moodooyinka iyo dadka caanka ah.
Kuwani waxay ahaayeen qaar ka mid ah talooyinka ugu wanaagsan ee aan soo jeedin karno. Hadda waa waqtigii aad ku xidhi lahayd naqshadaada oo aad diirada saarto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » sida loo sameeyo joornaal
Sida loo qaybiyo muuqaalka dhawr qaybood